संघीय सरकारले ७० प्रतिशत वजेट आफैसँग राखेर के गर्न खोजेको हो ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » संघीय सरकारले ७० प्रतिशत वजेट आफैसँग राखेर के गर्न खोजेको हो ?
काठमाडौ जेठ १६ गते । प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवले केन्द्र सरकारले संघीयता विरोधी वजेट प्रस्तुत गरेको अरोप लगाउनु भएको छ ।
देश संघीयतामा गइसकेको छ, स्थानीय तह र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा आइसकेको छ तर कार्यक्रम र वजेट सबै केन्द्रमै राखेको आरोप लगाउँदै उहाँले ७० प्रतिशत वजेट केन्द्र आफैसँग राखेको बताउनुभयो ।
स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत अति, सातवटा प्रदेशलाई पनि १५ प्रतिशत वजेट दिएर केन्द्र सरकारले के देखाउने खोजेको भन्दै भन्दै मन्त्री यादवले ७० प्रतिशत सिंहदरबारमै राखेर देश निर्माण गर्ने सपना कहिले पुरा नहुने टिप्पणी गर्नुभयो ।
संघीय सरकारले प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड अनुदान बजेट दिने घोषणा गरेको छ । यस्तै स–शर्त अनुदानतर्फ ३३ अर्ब ५५ करोड बजेट दिने जनाएको छ ।
संघीयता अनुसार वजेट नआएको भन्दै उहाँले संशोधित वजेट आउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । यस्तो खालको वजेटले संघीयता कमजोर हुनेको साथै देशले लिएको लक्ष्य पुरा नहुने उहाँले टिप्पणी गनुृभयो । ‘यो बजेट परम्पराको निरन्तराता हो, संशोधित बजेट ल्याउनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
नेपाल कृषि प्रधान देश भएको र कृषिलाई कुनै किसिमकाके प्राथमिकता नदिएको बताउँदै उहाँले केन्द्र सरारले कृषिलाई प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो गर्नुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यको पनि त्यही अवस्था रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश २ को कृषिमा मात्र ध्यान दियो भने देश चाँडै आत्मनिर्भर हुने उहाँले बताउनुभयो ।